Chipiri 12 Mbudzi 2019
Nyamavhuvhu 31, 2019
Shamwari yaDoctor Tererai Trent Yorumbidza Ruremekedzo Rwakavakapihwa muNew York
Shamwari yaDoctor Tererai Trent inoti irikufara uye inorumbidza ruremekedzo rwakavakapihwa muguta reNew York umo makaparurwa chivakwa chavo chinocherechedza mabasa avari kubata kuZimbabwe. Doctor Trent vari kuvaka zvikoro munzvimbo yeHurungwe mushure mekupihwa mari neshorma Opprah Winfrey.
Chimwe Chizvarwa cheZimbabwe Doctor Tererai Trent Chodadisa muAmerica
Doctor Tererai Trent avo vanoita mabasa ekuvaka zvikoro munzvimbo yeHurungwe kuMashonaland West varikudadisa muAmerica umo vakacherechedzwa nechivakwa muguta reNew York nemabasa avo. Doctor Trent vakapihwa $1.5million neshoroma Oprah Winfrey kuti vavake zvikoro. Nyaya ina Marvellous Mhlanga-Nyahuye
Chikunguru 31, 2019
Zvimwe Zvizvarwa zveZimbabwe Zviri Muchirongwa cheMandela Washington Fellowship Zvoshanyira Studio 7
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muchirongwa cheMandela Washington Fellowship zvakashanyira Studio7 neChipiri. Mike Hove weStudio7 akaita hurukuro naMuzvare Samantha Sibanda, avo vari pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muchirongwa cheMandela Washington Fellowship zvakashanyira Studio7 neChipiri uko vaitaura nezve chirongwa ichi. Jonga Kandemiiri weStudio 7, akaita hurukuro naMuzvare Thandekile Moyo mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino.
Chikunguru 28, 2019
Chirongwa Chevechidiki Chatinopakurirwa naMike Hove
Muchirongwa chedu chevechidiki kana kuti Youth Forum. Tine hurukuro na VaPassmore Ndlovu avo vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship.
AU Yotungamira Mhemberero dzeZuva reVatori veNhau
Mhemberero huru dzekucherechedza zuva revatori venhau reWorld Press Day dzakaitirwa kuAddis Ababa, Ethiopia kumuzinda weAfrican Union.
Vatsigiri veStudio7 Vepa WhatsApp Vopa Pfungwa Dzavo Pazuva reWorld Press Freedom Day
Vatsigiri veStudio7 vepa WhatsApp vopa pfungwa dzavo pazuva rekucherechedza mabasa anoitwa nevatori venhau reWorld Press Freedom Day iro ririko nhasi. Manzwi arikutaurwa nevatsigiri veStudio7 aroratidza pfungwa dzavo kwete dzeStudio7 kana VOA.
Amai Mutsvangwa Vanoti Hurumende Iri Kuvandudza Mutemo weAIPPA
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende inoremekedza zvikuru vatori venhau uye iri mubishi kuvandudza mitemo inonzi inodzvinyirira vatori venhau yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act.
Mhemberero Huru Dzekupembera Mabasa Arikubatwa neVatori Venhau Dzoitwa Kumuzinda weAfrican Union kuAddis Ababa Ethiopia
Mhemberero dzekupembera mabasa arikubatwa nevatori venhau dziri kuitirwa kumuzinda weAfrican Union kuEthiopia parizvino pazuva reWorld Press Freedom Day. Vatori venhau vepasi rose vari kumhemberero idzi. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muAU muzvare Wayne Musabayana vonotipa pfungwa dzavo.
Mukuru weVOA Amai Bennet Vanoti Vatori Venhau Vane Basa Guru Kuunza Hutongo hweJekerere
Mukuru weVoice of America Amai Amanda Bennet vaburitsawo mashoko nhasi vachitaura nezvekukosha kwezuva revatori venhau.
Vatori veNhau Vanoti Vari Kutadza Kuita Basa Vakasungunuka
Vamwe vatori vanhau munyika vanoti vari kutadza kuita basa ravo nemazvo nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira mitemo inovambunyikidza pamwe nekuoma kwaita zvinhu munyaya dzehupfumi.